INTER MILAN VS BENEVENTO: Shaxda & safafka ay caawa kusoo geli karaan! – Gool FM
INTER MILAN VS BENEVENTO: Shaxda & safafka ay caawa kusoo geli karaan!
Raage February 24, 2018
(Milano) 24 Feb 2018 – Waxaa caawa ciyaaraya labada kooxood ee Inter Milan vs Beneventos oo ku ballansan gegada caanka ah ee San Siro ee magaalada Milano, iyadoo ay Inter hollinayso inay jidkii guusha kusoo laabato, halka kooxdan yari ay tahay wan goowracani geedo kama waabto.
Dhanka Inter: Waxaa soo wada laabtay Icardi iyo Miranda balse labaduba kaydka ayay kasoo bilaabi doonaan, si ay diyaar ugu noqdaan kulanka Derby Milano. Waxaa sidoo kale soo kabtay Perisic. Candreva ayaas sidaa ku safan kara, halka uu daallan yahay Rafinha oo uu Spalletti sheegay “in xaaladdiisa la qiimaynayo”.
Dhanka Benevento: Macallin De Zerbi oo ciyaartan ugu yeerey 24 laacib ayaa dib u helaya Cataldi kaasoo geli kara booska Guilherme, Sagna ayaa safka hore ku jiri kara. D’Alessandro ayaa la maqan dhibaato dhanka jilibka ah.
27 PADELLI, 89 PISSARDO, 21 SANTON, 29 DALBERT, 2 LISANDRO LOPEZ, 25 MIRANDA, 5 GAGLIARDINI, 8 RAFINHA, 17 KARAMOH, 99 PINAMONTI, 9 ICARDI
22 BRIGNOLI, 83 SAGNA, 23 VENUTI, 29 BILLONG, 18 GYAMFI, 20 MEMUSHAJ, 4 DEL PINTO, 14 VIOLA, 26 PARIGINI, 87 LOMBARDI, 33 IEMMELLO, 25 DIABATÉ
Lucioni (fino a ottobre 2018)
Isku aad koobka kubadda koleyga Janeraal Daa’uud oo la soo saaray+SAWIRRO
Arsenal oo ugu cadcad kooxaha doonaya Andre Silva